Apple Inoburitsa iOS 11.2 uye watchOS 4.2 Beta 1 yeVagadziri | IPhone nhau
Kana isu tichakamirira Apple kuti itange iOS 11.1 iyo ichaunzira isu nyaya dzakakosha sekudzoka kwe3D Kubata kwe multitasking uye Reachability basa zvakare rinoshanda sezvakaita muIOS 10, Apple inoenda uye inotangisa yekutanga Beta yeiyo inotevera vhezheni, iOS 11.2, pamusoro peiyo inoenderana yeiyo watchOS 4.2. Aya maBetas ekutanga achiri kungowanikwa kune vanogadzira izvo zvino vagadzirira kurodha pasi.
Hatizive zvizere kuti ndedzipi nhau idzo mbiri nyowani shanduro dzichatikanganisa, asi Isu tatova kudhawunirodha pane yedu iPhone uye Apple Watch kuti vakuudze iwe wekutanga-ruoko izvo zvese izvo zvinosanganisira. Zvino iyo iPhone X yave kukona, Appel yaigona kuvhura mashandiro aive akamirira yazvino terminal kuti itengese.
Pachine mabasa ayo Apple aitarisirwa kuvhura mune yekupedzisira vhezheni yeIOS 11.1 uye iyo isina kugoneswa mune chero maBetas atakakwanisa kuyedza kusvika parizvino: Meseji muICloud uye Apple Bhadhara Cash. Hatitonge kunze kuti Apple inopedzisira yawedzera mabasa aya mune yeruzhinji vhezheni kuti inotanga pakati nhasi uye mangwana (zvinofungidzirwa), asi parizvino hapana kana trace kunyangwe muBeta 1 yeIOS 11.2, saka zvinoita sekunge hazvigoneke kuti tichazopedzisira taona idzi nhau munguva pfupi iri kutevera.
Parizvino, chinhu chega chatakawana chakakodzera kujekesa ndechekuti iwo mapikicha ayo kusvika parizvino anga akasarudzika kune iyo nyowani iPhone 8, 8 Plus uye X vatovapo pamidziyo yese mune ino Beta yeIOS 11.2. Kumwe kudzikama uye kuvandudza kwekuita kwebhatiri kuchiri kuzoonekwa. iOS 11.1 yakareva kune vazhinji kudzoka kwebhatiri rinogamuchirwa, Mushure mematambudziko mazhinji mushanduro dzakapfuura. Tichaona kana iOS 11.2 ichienda kumberi uye pakupedzisira vashandisi vane yakagadzikana vhezheni ine kuzvitonga kunodiwa nemunhu wese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inoburitsa iOS 11.2 uye watchOS 4.2 Beta 1 yevagadziri
Ini ndaisa iOS 11.2 pane yangu iphone 5s uye yakagadzirisa zvishoma kuita kwangu bhatiri, asi zvinoenderana nekuravira kwangu hazvigamuchike parizvino.
Iyo Apple Park Yevashanyi Center yapera